6 Bankiyada ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Open Account Accounts' - Talooyin iyo Talooyin
6 Dalal Wanaagsan si loo Furo Xisaab Bangi Bannaanka
Dadku waxay bixin doonaan talooyin badan marka ay timaado xisaab bangi oo wanaagsan. Tani ma aha sababtoo ah qaar ka mid ah waa kuwo khalad ah - waxaa jira fursado badan oo kala duwan. Bangiga ugu wanaagsan ee hal qof ama shirkad ah ma noqon karto midka ugu haboon ee qof kale.
Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, waddamada qaar ee maal-galiyeyaasha dibadda ka hadlaya. Maqaalkani, waxaanu baadhaynaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican bangiga badda dalalka - iyo waxa ay ugu fiican yihiin.
Dalka ugu Fiican ee Lacagta Canshuurta - Cayman Islands
Jasiiradaha Cayman waxay leeyihiin sumcad caalami ah oo xoog leh, oo siisa adeegyo maaliyadeed oo balaadhan macaamiisha kala duwan. Jasiiraddu sidoo kale waa goob canshuureed. Kani waa eray uu ku qeexay Investopedia inuu yahay dal siiya shaqsiyaad ajnabi iyo ganacsato canshuur yar. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay jawi siyaasadeed iyo dhaqaale deggan, taas oo shuruud u ah dadka badankood.
Canshuurta tooska ah ee aan laheyn canshuuraha ayaa caan ka ah Cayman Islands waxay ka heleen ilaha bangiga dibadda, ayuu yidhi Cayman.com. Ma jiraan wax canshuur ah oo ku saabsan faa'iidada raasumaalka, shirkadaha, hanti-bixinta, hantida, mushaharka, ama dakhliga. Intaa waxaa dheer, ma jiro xakameyn is-dhaafsiga, u oggolaanaya fii lacag-bixin lacag la'aan ah inuu galo ama ka baxo jasiiradaha lacag kasta. Ma jiraan wax shuruudo hanti ah.
Dunida waxaa ku yaalo canshuur badan. Marka, reer Caymaan wax badan ayey qabteen si ay u kasbadaan sumcaddooda heerka sare ah ee ah halka ugu habboon ee lagu tegi karo bannaanka xeebta. Waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa ugu sarreeya xarumaha caalamiga ah ee xNUMX xarumaha dhaqaalaha adduunka. Intaa waxaa dheer, sharciga bangiyada Cayman Islands waxaa ku jira qodobbada sirta ee macaamiishooda. Jasiiraddu waxay diyaariyeen qaab-sharciyeed adag oo loogu talagalay adeegyadooda bangiyada ka hawlgala. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku tartamayaan suuqyada lacagta Euro.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in, inkasta oo Caymans ay bixiyaan waxtarka canshuurta ee muhiimka ah; wadamo badan, sida Maraykanka iyo Ingiriiska, canshuurtooda iyo dadka degan dakhliga guud ee canshuurta.
Dalka Wanaagsan ee Hanti Badan - Singapore
Ma haysaa $ 200,000 ama kabadan oo aad rabto inaad ku dhigato koonto meel ka baxsan ah? Singapore ayaa laga yaabaa inay tahay doorashadaada ugu fiican. Nidaamka koontada caadi ahaan waa mid fudud. Xaaladaha badankood, waad sameysan kartaa koonto adigoon waligaa u safrin Singapore, Sing Sav ayaa sharxay.
Mid ka mid ah sababaha dadku u doortaan Singapore waa sababta oo ah sumcaddeeda oo ah meel deggan oo aamin ah oo lagu keydiyo hantida. Dalku wuxuu ku leeyahay sharciyo adag xeerarka bangigooda. Taas macnaheedu waa in hantidaadu si wanaagsan loo ilaaliyo. Bangiyadoodu sidoo kale waxay leeyihiin teknolojiyad goynaysa. Tani waxay u oggolaaneysaa nabadgelyada iyo sidoo kale helitaanka fudud ee hantidaada.
Singapore waxay bixisaa adeegyo maareyn maaliyadeed oo kala duwan, lacag, guryo burbura, iyo akoonno lagu maareeyo lacagtaada. Waxa kale oo jira habab ganacsi oo kala duwan oo looga faa'ideysan karo suuqyada Singapore. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku siineysaa jidad Mareykanka, Hong Kong, Shiinaha, Yurub, iyo inbadan. Xisaabaadka waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo lacagaha ah, iyadoo la dhimayo dhibaatada heerarka sarrifka lacagaha. Bangiyada ku yaal Singapore ayaa sidoo kale leh kooxo maarayn hanti leh. Xirfadlayaashan waxaa ka go'an inay kaa caawiyaan sidii aad ku heli lahayd istiraatiijiyad maaliyadeed ugu fiican ee lacagtaada.
Dalka Wanaagsan ee Badbaadada Hantida - Switzerland
Switzerland waxay muddo dheer sumcad u laheyd inay noqoto mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan ee xeebta ku yaal si ay u qariyaan lacagta. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee tani waa shuruucda qarsoodiga ah ee waddanka. Waxay dib ugu soo celinayaan sanadaha 300, Sida Shaqooyinka Waxyaabaha ay sharraxayaan. Sharciga Swiss ayaa mamnuucaya bangiyada in ay bixiyaan macluumaad kasta oo ku saabsan koontadaada adoon ogolaansho. Bankiyeyaasha ku xad gudbaya sharcigan waxay wajihi karaan ilaa lix bilood oo xabsi ah. Waxaa intaa dheer, masuuliyiinta waxay ku ganaaxi karaan ilaa fransiiska Swiss 50,000. Kaliya marka laga reebo sharciga qarsoodiga ah waa kiiska fal danbiyeedka. Plus waxaa jira warbixinta sanadlaha ah ee hay'adaha canshuuraha ajnabiga ah si looga fogaado canshuur bixinta.
Qorshaha Badbaadada Maalgashiga ugu fiican wuxuu hantidaada ka soocayaa dalkaagii hooyo; iyo qolalka dhegaysiga. Si aad sidaas u yeelatid, waxaa muhiim ah in aad xisaabtaada ku haysatid jariidad ku taal jasiirad ama meel aamin ah. Sharciyada gaarka ah ee gaarka ah ee ku yaala Switzerland iyo shuruucda ilaalinta hantida ee jasiiradaha Cook ama Nevis waxay suurtagal noqon karaan.
Sabab kale oo ka danbeeya caannaanta Switzerland sida bangiga ee ilaalinta hantida ayaa ah amnigeeda sida maalgashiga khatarta yar. Xiisadaha siyaasadeed iyo dhaqaal ee Switzerland ayaa ah kuwo deggan. Ururka Bangiga ee Swiss (SBA) wuxuu xakamayaa bangiyada. Switzerland ma canshuurayso canshuurta, saamileyda ama dhaxalka, haddii shirkadda Swiss aysan helin faa'iidooyinkaas. Sharciga Swiss-da wuxuu dalbanayaa kufilasho raasumaal oo waaweyn. Sida 2004, SBA waxay dib u eegtay Heshiiska Ilaalinta Dakhliga. Heshiiskani wuxuu damaanad qaadayaa in haddii ay dhacdo bangiga oo ku guul daraysto, dayn-bixiyeyaashu wali waxay heli doonaan sheegashadooda sharciga ah ee mudnaanta leh.
Wadanka Shirkadaha Wanaagsan - Nevis
Haddii aad raadinayso inaad guurtid shirkadda xeebta, Nevis waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan. Taasi waa halka aan ka sameyneyno 70% ee shirkadaha dibadda ka ah waxa aan ku darno. Maxay dad badan u keenaan jasiiradaha waa shuruudaha ilaalinta hantida, kharashka yar iyo heerarka sare. Tani waxay si gaar ah u tahay runta Nevis LLC, sababtoo ah qawaaniinta ilaalinta hantida awoodda leh. Shirkadaha Nevis waxay leeyihiin qaabdhismeed hawlgal ah oo loola dhaqmo iyadoo la marayo shuruudo yar oo sharci ah. Ma jiraan canshuur dheeraad ah ama qawaaniin iyo Guddiyada Adeegyada Maaliyadeed waxay ku hayaan heerar sare.
Shirkadaha Nevis waxay leeyihiin faa'iidooyin weyn oo loogu talagalay mulkiilayaasha shirkadaha iyo xubnaha saamileyda / JSL. Shirkadaha waxay u guuri karaan ama ka iman karaan xudduud kale, sidoo kale waxay isku dardareen ama la macaamilaan Nevis kale ama shirkado shisheeye. Ma jiro sharci sharci ah oo u baahan shirkadaha Nevis inay leeyihiin hantida raasamaalka. Waxaa intaa dheer, saadaashyada waxaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo agaasimayaasha shirkadda. Sharciyeyaashu waxay leeyihiin shuruudo ilaalin ah waxayna ka baxi karaan shirkad qiimo cad. Sidoo kale, shirkadaha Nevis waxay liis garayn karaan saamigooda saamiyada is-dhaafsiga adduunka oo dhan. Tani waxaa ka mid ah NASDAQ, London Stock Exchange, International Securities Exchange, iyo in ka badan.
BVI wuxuu ahaa guusha hore ee qaybtan. Hase yeeshee, xeerarka ka baxsan, awoodaha - kuwaas oo si wax ku ool ah u dhistay calaamad aad u weyn oo ku aaddan qaanuunka. Waxaan rajeyneynaa inay ugu dambeyntii toosi doonaan ayna ogaan doonaan inay jiraan xulal kale oo adduunka ah. Waxaa laga yaabaa in maamulku uu bedelayo xeer-ilaaliyeyaashu hadda haystaan ​​kuwa leh khibrad ganacsi. Ka dib, waxay u badan tahay inay dib u soo kabtaan luuqadooda hore.
Dalal Wanaagsan ee Sicirrada Dakhliga Sare - Belize
Haddii aad raadineyso qiimaha dulsaarka bangiga ugu fiican, waxaa dhici karta in Belize aysan ku jirin liiskaas. Taa baddalkeeda, raadintaada waxay muujin kartaa wadamada sida Ukraine, kuwaas oo ku faani kara 20% dulsaarka dulsaarka. Miyuu fiican yahay, sax? Waxay qabataa, ilaa aad ka fikirto waxyaabaha sida sicir bararka iyo amniga bangiga. Sicir bararka Ukraine waa 49%. Tani waa farqiga 29% taas oo siineysa dulsaar dhab ah oo dulsaar ah, heerarka Bixinta Bankiga. Ukraine waxay leedahay laba dhibaato oo waaweyn: waa hubka lacagta la dhaqay iyo lacagta Ukraine ayaa hoos u dhacday. Tani waxay ka dhigan tahay in lacagtaada aysan ahayn mid aad u adag, mar walbana ma arki doontid in 20 ay wanaagsan tahay ku soo noqoshada maalgashiga.
Marka maxaa diidaya? Laga soo bilaabo qoraalkan, Belize wuxuu leeyahay dulsaar dhab ah oo qiyaastii ah 2.54%. Waxay leedahay sicir barar ku dhow 0%, illaa bartamaha 2019 halkii Dhaqaalaha Ganacsiga. Taasi waa waxyar inyar ka sareeya wadamada kale ee lagu xusay qodobka, marka lagu daro Mareykanka iyo Kanada. In kasta oo taasi aysan jirin 20%, Belize sidoo kale waa waddan deggan oo leh faa'iidooyin badan oo kale. Lan Sluder wuxuu sharraxayaa in akoonnada caalamiga ah ee Belizean aysan ku hoos jirin canshuuraha gudaha ama ay sarrifka xakameynta xakameynayaan. Kuwa haysta akoonku waxay ka dooran karaan inta badan lacagaha waaweyn, iyo sarrifka u dhexeeya Belize iyo Mareykanka waa 2: 1. Dalka waxaa sidoo kale caan ku ah dhowridda asturnaanta macaamiishooda. Intaas waxaa sii dheer, Bangiyada caalamiga ah ee Belizean waxay u adeegaan macaamiishooda caalamiga ah - majiraan macmiil maxalli ah oo la oggol yahay.
Dalka Wanaagsan ee Badbaadada - Jarmalka
Liistada ugu dambeysay ee bangiyada ugu amaanka badan, mid kamid ah Bangiyada Jarmalka ayaa qaata kaalinta koowaad. Jarmalku wuxuu hayaa seddex boos oo kale tobanka sare, wadarta guud ahaan lixda 50. Lacagaha, oo ah shirkad Jarmal ah, waxay wadaagaan sababta ugu weyn ee ka dambeysa Jarmalku inuu yahay isha loogu talo galay bangiyada adduunka ee ugu ammaansan adduunka. Waxay yiraahdaan waa xasilloonida dalka; gaar ahaan xagga dhaqaalaha. Waa il caan ah xagga keydadka, hubinta, iyo koontada haynta.
Tan iyo Jarmalku waa waddan casri ah oo horumar leh, xisaabiyayaashu waxay heli doonaan adeegyo casri ah oo internetka iyo adeega ATM ah, 24 / 7. Xaalado badan, uma baahnid inaad joogtid si aad u furato xisaab Jarmalka. Intaas waxaa dheer, kharashyada furitaanka iyo dayactirka inta badan waa kuwo hooseeya. Bangiyada qaar ayaa sidoo kale bixiya ikhtiyaarka ah in lagu qaato kaarka deynta ee Visa ama MasterCard. Faa'iidooyinka ayaa ka sii weyn haddii aad jeceshahay inaad safarto. Taasi waa, sida xisaabta Euros u noqon kartaa mid faa'iido leh oo dhan Yurub. Waxaa intaa dheer, bangiyada qaarkood waxay leeyihiin lacag dheeraad ah oo loogu talagalay safarrada soo noqnoqda.
Ma ahan meel wanaagsan haddii aad haysatid dacwad soo socota, si kastaba ha noqotee. Jarmalku wuxuu fuliyaa xukunnada shisheeye. Marka, haddii ilaalinta hantidaadu tahay yoolkaaga, meel kale u aado.
Bangiga ugu wanaagsan ee Bankiga Talo-bixinta Furitaanka Xisaab
Furitaanka akoon mid ka mid ah dalalkan waxay ku kala duwanaan doontaa dhib iyo kharash bixin dal iyo bangi. Diyaar ma u tahay inaad qaaddo tallaabada xigta oo aad furto akoonkaaga bangi ee dibedda ama aad macluumaad dheeraad ah hesho? Xor baad u tahay inaad la hadashid mid ka mid ah xirfad-yaqaannadayada maaliyadeed. Waxay hubin karaan inaad ka faa'idayso koontadaada. Intaas waxaa sii dheer, shaqaalahayagu waxay la shaqeyn karaan xisaabiye si ay u hubiyaan inaad raacayso shuruucda cashuurta ee ku habboon.
Investopedia waxay soo bandhigaysaa waxyaabo dheeraad ah oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso markii aad furaysid koonto meel ka baxsan ah. Shuruudaha aasaasiga ah waxay la mid noqon doonaan furitaanka xisaab wadankaaga hooyo. Waxaa lagu weydiin doonaa macluumaad shaqsiyeed sida magacaaga, taariikhdaada, dhalashadaada, cinwaankaaga, dhalashadaada, iyo shaqadaada. Xitaa wadamada leh sharciga gaarka ah ee ugu adag sharciga ayaa weydiin doona tan. Tani waa sababta oo ay muhiim u tahay markii la sameynayo koontadaada in baanka uu caddeyn karo aqoonsigaaga.
Dukumiintiyada qaarkood ee aad ugu baahan karto koontadaada waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda. Waxay u badan tahay inay weydiisan doonaan nuqulka laysankaaga iyo / ama baasaboor iyo caddeyn cinwaanka. Intaa waxaa u dheer, hay'ado badan ayaa weydiisan doona dukumintiga tixraaca maaliyadeed bangigaaga hadda. Waxay ku weydiin karaan nooca macaamillada ganacsi ee la filayo inay ku baxaan xisaabaadka. Intaas waxaa sii dheer, waxay u baahan doonaan inay caddeeyaan aqoonsigaaga. Kuwani waa qawaaniinta lacageed ee ka hortagga lacagta. Bangiyada ayaa doonaya inay hubiyaan inuusan qof u adeegsanaynin howlahooda sharci darrada ah.
Gabagabo - Helitaanka Baanka Midig
Sidaad u aragto, ma jiro hal-cabbir-isku habboon-dhammaan. Waxa jira waxyaabo badan oo la kala dooran karo marka la eego doorashada waddanka oo laga furayo koonto bangi meel ka baxsan. Dhamaan waddamada kor lagu soo sheegay waxay leeyihiin faa'iidooyin ka sarreeya waxa ay “ugu fiican yihiin.” Qaar ayaa bixiya heerar dulsaar badan marka loo eego bangiyada guryaha. Soo ogow wadanka kugu habboon. Si aad sidaas u yeelatid, waxaad raadsan kartaa caawinta mid ka mid ah aqoonyahanada dhaqaalaha ee khibradda leh. Fadlan isticmaal foomka weydiimaha ama nambarka taleefanka ee boggan. Waad nala soo xiriiri kartaa adigoo adeegsanaya mid ka mid ah hababkan. Markaa waxaad ka bilaabi kartaa koontada bangi ee ugu fiican adiga.
Markay tahay badbaadada sawirkaaga dhaqaale iyo qorshaynta badbaadintaada, maskaxda ku hay talooyinkaan. Intaa waxaa sii dheer, waxaad dooneysaa oo kaliya hay'adaha ugu ammaansan uguna amniga badan adduunka. Iyada oo ku xiran tahay xukunka aad dooratay, ururkani wuxuu leeyahay xiriiryo leh bangiyada badda ee nabdoon oo bixiya si degan oo xasiloon iyo nabadgelyo.
Bangiyada dibedda ama bannaanka ka baxsan waxay tixraacaan hay’ado badan oo banki iyo maalgashiba leh. Waxaa laga heli karaa waddammo iyo xukumado aan ka ahayn waddankii maal-gashadaha. Farsamo ahaan qofku ayaa tixgelin kara bangi kasta oo dibedda ah marka uu buuxiyo shuruudahaa kore. Intaas waxaa sii dheer, xirfadlayaashu guud ahaan waxay u hayaan ereyada hay'adaha bangiyada ku yaal halkaas oo ay xushmad sare u hayaan qarsoodiga khaaska ah.
Tan iyo markii ay asal ahaan ka soo jeedeen Bangiyo Dibadeed, waxay u muuqdeen inay si aan caddaalad ahayn u sharraxeen labadaba warbaahinta iyo xeerarka guryaha. Eedeymaha ayaa ka yimid ka baxsiga canshuuraha illaa lacagta la dhaqay. Laakiin si taxaddar leh u baar ujeeddada dhabta ah ee Xisaabaadka Bangiga Dibadda. Kadib samee xoogaa cilmi baaris ah oo aan habbooneyn si aad u baarto halka lacageed sharci darrada ah lagu hayo ama "la duubay." Tani waxay iftiin u noqon doontaa xaaladda. Eedeymaha kale ee been abuurka ah waxay udub dhexaad u ahaayeen dhaleeceynta jawiga aan aaminka aheyn, nidaam xumo, iwm.
Mar labaad, kuwani kuwan kama fogayn karaan runta. Inta badan awoodaha Xisaabaadka Bangiga Dibadda ee xaraf kasta waxay leeyihiin xeerar bangiyo xasiloon, oo xasiloon. Tani waa sababta oo ah inay dantooda ugu jirto in ay soo jiitaan oo ay hayaan keydiyaha. Maamulka ayaa qawaaniyey qawaaniintaan ku aaddan buuxinta baahiyaha lacag-hayaha. Qaar badan oo ka mid ah sharciyadan waxay ku tiirsan yihiin raasamaal shisheeye oo lagu haysto bangiyadooda sida ay u yihiin cunsur dhaqaale. Waxaa intaa dheer, bangiyadaan badanaa waa isha ugu weyn ee maalgashiga shisheeye.
Maxay tahay Bangiga Dhexe?
Qeexida ballaadhan ee bangiga dibedda ahi waa bangi ku yaal amar-bixin ama waddan ka duwan awoodda ama waddan ay maal-gashadehu ama maalgashadeedu deggan yihiin. Mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee haysashada koontada Bangiga Dibadda waa in badanaa ay ku yaalliin meelaha canshuurta laga qaado. Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin sharciyo siiya ilaalin hanti muhiim ah iyo faa'iidooyin qarsoodi ah qofka leh akoonka bangiga. Xeerarkan ayaa sidoo kale inta badan u oggolaanaya nasashada xaddidaadaha iyada oo la tixraacayo noocyada akoonnada bangi ee dibedda. Waxaa jira qawaaniin u fidiya xadadka halista maal-galiyeyaasha ama maalgashadayaasha. Markaa, sharciyeyaasheyaashu waxay qeexayaan sida baanka uu u maareeyo una maareeyo lacagaha loogu talagalay badbaadada ugu badan ee keydka. Si kastaba ha noqotee, si kastaba ha noqotee, nidaam-dejiyayaashu waxay rabaan inay siiyaan maal-geeyayaasha tiro balaadhan oo ah bankiyo iyo xulasho maal-gashi. Tani waxay u dhigantaa hoos u dhac ku yimid sharciyadii ku keydsan dhigayaasha.
Xeerarka caanka ah ee xeebaha caan ka ah badanaa waxay bixiyaan hoos u dhac weyn waajibaadka canshuurta. Halka, kuwa wadamada qaarkood, sida Mareykanka ay muwaadiniintooda ku canshuuraan dakhliga adduunka. Ujeeddooyinkayada halkan waxaan diiradda saari doonnaa oo keliya kuwa la caddeeyay inay bixiyaan waxtarro aan la qiyaasi karin sida kor lagu soo sheegay. Bangiyadan Dibad-joogga ahi waxay ku yaalliin yihiin waddamada dhabta ah ee jasiiradaha sida Caymans ama Channel Islands. Bedel ahaan, waxay joogi karaan waddamada aan cidlada lahayn sida Switzerland. Swiiserland waxay ahayd meel cashuureed in ka badan boqol sano - waana ka dheer tahay waddamada jasiiradda.
Waxaa jiray wada sheekeysi badan oo ku saabsan asturnaanta bangiyada Switzerland. Waad ogaan doontaa, si kastaba ha noqotee, bangiyada Switzerland ee kaliya ee lahaa arrimaha waa bangiyada leh laamo ku yaal meel ka baxsan Switzerland. Buugga Suitse iyo UBS waxay leeyihiin joogitaan Mareykan ah oo muhiim ah. Markaa, nidaamiyaasha Mareykanka waxay waddo la yeelan karaan bangiyadaas. Kuwa leh goobahan Switzerland oo keliya waxay sii wadaan ilaalintooda gaarka ah.
Sida ku xusan sadarkayaga furitaanka, waxaa jira dhowr fikrado khaldan iyo khuraafaad la xariira akoonnada bangi ee dibedda. Bangiyada Dibadaha Ma Iyagu Yihiin Xawaaladaha Lacagta iyo Dambiilayaasha? Aqri qeybta khuraafaadka bangiga ee websaydhkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Maqaalkan, waxaan haynaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan khuraafaadka akoonnada Bangiga Dibadda oo ay tahay in tixgalinta la siiyaa.
Xagee loo Dhisayaa Koontadaada Dhulka?
Waa muhiim inaad doorato awooda ku haboon marka aad goaansaneyso awooda loo adeegsan karo sida awooda maareynta bangiyada. Inta badan maamullada xeebaha waxay leeyihiin xikmad, xeerar macquul ah. Waxay diyaar u yihiin inay ilaashadaan deebaajiyada isla markaana ay ilaashadaan xogtooda. Si kastaba ha noqotee, qaar ayaa miisaamaya faa'iidooyinka ay ku leeyihiin cashuuraha, halka qaar kalena sirta ku jiraan, iyo wixii la mid ah.
In kasta oo ay dhammaantood bixiyaan jawi isbarbardhigaya oo amni leh, haddana waxay tixgelin siineysaa in ay qeexdo waxa ay yihiin himilooyinka banki. Markaa waxaad dooran kartaa xukunka si ku habboon. Tiro yar oo ka mid ah maamulada xeebaha ayaa qabta shaqooyin liita oo ah maaraynta iyo nidaaminta nidaamyadooda bangiyada. Laakiin maal gashadaha ama lataliyaha la soo wargeliyey wuxuu u qaadan doonaa kuwan mid aan ku habooneyn naftooda ama macaamiishooda. Intaa waxaa sii dheer, nidaamyadan si xun u abaabulan iyo kuwa maamula ayaa had iyo jeer maamula macaamiisha sharci darrada ah. Sidaa daraadeed, waxay caddeeyeen bartilmaameedyo fudud oo FATF (Financial Action Task Force) iyaga oo raadinaya lacag la dhaqay ama falal kale oo dambi ah.
Halkan waxaa ku qoran maqaal la xiriira Bangiyada Jasiiradaha Cayman iyo mid kale
Bangiyada Belize. Halkan, waxaad ku arki doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan labadan xukun.
Taariikhda Xisaabaadka Baanka Dhexe
Waa xaqiiqo nasiib-darro ah in dadka yurubiyanku had iyo jeer ku dhaceen culays wayn canshuurta culayska. Tani waxay run ka ahayd Jasiiradaha Ingiriiska sidii ay ahayd qaarad ahaan. Reer Yurub waxay la kulmayeen rajada ah inay daawadaan hantidooda adag ee kasbatay iyo xoolahooda oo yaraaday. Gacan walba oo gacanta ku qaada cashuurqaadayaashu waxay dhacayaan xoolahooda. Sidaa darteed, qaaraddu waxay u bislaatay xal.
Kadib xal ayaa yimid. Dalka yar, jasiirad qaran oo loo yaqaan Channel Islands ayaa la yimid fikrad. Waxay ka dhaadhiciyeen kaydiyaashan niyad jabsan in dhigaalka lagu shubo bangihiisa uu noqon karo mid ka madax bannaan kormeerka; sidaa darteed, culeyska cashuurta culus. Faa'iidooyinkaasi waxay ka dhaadhiciyeen dad badan oo reer Yurub ah oo hodan ah. Si dhakhso leh ayaa adeegani u kobcay. Awoodda kale ee yar yar ayaa fiiro gaar ah leh. Iyagu, sidoo kale, waxay noqdeen kuwo badbaadin u ah magnet-ka soo jiidashada shisheeyaha waxayna bilaabeen inay dib u habeeyaan xarumihii ay ku lahaayeen baananka. Gacmo badan oo dalalku waxay qaateen qawaaniin, xeerar iyo nidaamyo bankiyeed oo saami ah. Markaa, waxay fududeeyeen walaacyada maalgashadayaasha iyo maal-galiyayaasha. Bangiga Dibadda wuxuu ku maqnaa bilow bilow ah!
Isla mar ahaantaana ereyga “Bangiga Dibadda” wuxuu noqdey mid la mid ah maamul kasta oo yar, amarrada go'an. Waxay ku bixiyeen bangi aamin ah, sugan, qarsoodi ah oo leh sharciyo wax ku ool ah. Si dhakhso ah adduunka intiisa kale ayaa “ogahay.” Waxay bilaabeen inay u eegaan meelahaan sidii xal macquul ah loogu heli lahaa baahiyahooda. Mareykan, afrikaan, Aasiya, iwm., Waxay arkeen akoonyadan bangiyo dibedda laga soo qaatay inay faa’iido badan u tahay dhowr arrimood awgood. Si ka duwan bangiyadooda guriga, bangiyadan bannaanka ayaa loo aanayn jiray si joogto ah jahwareer siyaasadeed ama khilaaf dhaqaale. Inta badan dadka ganacsatada ah ee aqoonta leh waxay ku yaqiinsanaayeen degenaanshahooda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo faa'iidooyinka ilaalinta hantida.
Bankiyada Offshore ee Warbaahinta
Sanadihii la soo dhaafay, waxay adeegsadeen adeegsiga si weynna waa loo arki karaa. Isla mar ahaantaana, warbaahinta ayaa si aan caddaalad ahayn u soo bandhigtay xisaabaadka bangiyada shisheeye. Intaas waxaa sii dheer, xukumadaha waaweyni waxay u weeciyaan sumcadooda sida aaggii marqaatiga dambiilaha ee dhulka hoostiisa ku yaal. Wadamadan cashuurta sare leh iyo bangiyada lacagta badan waxay ku sifeeyaan inay yihiin marin loo heli karo hantida sida sharci darada ah loo helay. Waxay isku dayaan inay iyaga u sawiraan sidii ay u dooran lahaayeen aagagga loogu talagalay qorsheynta lacag-bixinta.
Maal gashadayaasha caqliga leh iyo kuwa wax keydiya waxay horey u ogaayeen in nacaybkaasi uusan ka sii dheeraan karin runta. Waxay ogyihiin in bangiyadaha bannaanka laga baxo ay si la taaban karo u noqon karaan magaalooyin waxtar u leh hantida; sida meelaha adag ee loogu baahan yahay maalgelinta u baahan badbaado, amaan, kalsooni. Waxaa intaa dheer, way ogyihiin in bangiyadan ay ilaalin karaan dhaqaalahooda. Taasi waa, inay hantidooda ka xafidaan halista qalalaasaha sokeeye, dhaqaale, ama qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalalkooda. Maanta, bangiyadaha dibedda ka socda waxay sii wadaan inay sii wadaan dhamaadka gorgortanka. Waxay sii wadaan inay bixiyaan meherado aamin ah, qarsoodi ah. Waxay u siinayaan magangalyo kuwa doonaya inay ka ilaashadaan lacagaha ka soo baxaa dhibaatooyinka sharci darrada iyo cashuuraha.
Qaar badan oo ka mid ah lacag-habiyeyaasha takoorka ayaa ka faa'iideystey ammaan, qarsoodi, iyo jawiga canshuureed ee hooseeya. Taasi waa waxa xisaabta bangi ee dibedda laga helo ay bixiyaan. Waa muhiim inaad qiimeyso yoolalkaaga oo aad kala hadasho wakiil karti leh, khibrad leh ka hor intaadan u dhaqaaqin biyaha aan biyuhu xirnayn. Waxaa jira faa iidooyin badan oo aan la saadaalin karin oo la bixiyo iyada oo la abuuro koonto bangi oo Dibedda ah. Waxa sumcaddooda ku dhex leh maal-galiyayaasha iyo maal-gashadeyaasha in ay bixiyaan meel ku habboon oo bangi oo muujinaya ka-ilaalin mas'uuliyadda iyo qarsoodinnimadu. Intaa waxaa dheer, bangiyadaha dibedda waxay ku sii socon doonaan sumcaddan adag ee lagu kasbado ilaalinta hantida, dhimista canshuurta (waxay kuxirantahay awoodaada), iyo sirta heer sarre ee asturnaanta.
<Illaa cutubka 6
Ilaa cutubka 8>